Shina : Ny Atao Hoe “Hery Avy Any Ivelany” Sy Ny Famaritana Vaovao. · Global Voices teny Malagasy
Shina : Ny Atao Hoe “Hery Avy Any Ivelany” Sy Ny Famaritana Vaovao.
Voadika ny 09 Aogositra 2013 11:24 GMT
“Hery avy any ivelany ” voambolana fampiasan'ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP) sy ny mpitondra teniny mba hilazana ny fandrisika ara-politika manosika ireo feon'ireo mpanohitra sy ireo vondrona any Shina. Raha vao fantatra fa ambany fifehezan'ny hery avy any ivelany ny olona iray na vondrona iray dia ara-dalàna ny fanenjehana azy ara-politika.
Ankehitriny, afotitr'ireo Shinoa mpampiasa tranonkala any amin'ny Antoko Kaominista io voambolana io.
Taona vitsy lasa izay, dia mitranga tsikelikely ny hadalan'ireo mpitarika ny antoko sy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta izay mandefa vola an-tsokosoko mankany ivelany mba hanatsarana ny fiainan'ireo fianakaviany any, mavitrika amin'ny famaritana vaovao ny atao hoe “hery avy any ivelany” ireo mpiserasera amin'ny aterineto mba hanesoana ireo mpitarika tia kolikoly.
Sariitatra politika iray nataonà mpitoraka bilaogy “”Speaking genuinely – Miteny tsy misorona” no iray amin'ireo ohatra tsara indrindra mahalaza ny fanaon'ny antoko politika ho fitantaràna ny kolikoly ao an-toerana :
Sariitatra Politika avy aminà mpitoraka bilaogy madinika “Speaking genuinely” ao amin'ny Sina Weibo. Hoy ilay mpiasam-panjakana : Amin'izao efa maha-any am-pita ny fianakaviako izao, afaka maka izay tiako aho.
Ity ambany ity ny fanazavana mifandraika amin'io sary io :
[Inona no atao hoe “hery avy any ivelany” ?] Ny vady mipetraka any am-pitan-dranomasina, no tompon'andraikitra amin'ny famotsiam-bolan'ny fianakaviana. Ny zanaka mampidera ny harem-pianakaviana any amin'ireo oniversite raitra any am-pita. Fananana miparitaka manerana izao tontolo izao. Vola mipetraka any amin'ny banky lehibe manerana izao tontolo izao. Nefa ny ray mpiasam-panjakana tompon'andraikitra amin'ny famadihana ny Yuan ho dolara Amerikana, ary mikabary ny amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fotoana rehetra. Izany no atao hoe hery avy any ivelany !
Mitondra ny anjara birikiny ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra amin'ilay lahatsoratra ihany koa ireo mpitoraka bilaogy madinika sasany amin'ny famaritana ny atao hoe” hery avy any ivelany” :
Zhang Lifang: Atao hoe “tanjaka tsara” ireo hery ireo. Ny ‘adala’ tsy tia ny fireneny no mitsikera azy ireo.
“Holy 2004″: Izy ireo no “tia tanindrazana” izay ny vatany no eo amin'ny Fanjakana fa ny fony any ivelany.
” I Xiaohua, mpanoratra tantara an-tsehatra” no namadika ” ireo vitsy an'isa voaisa amin'ny rantsan-tànana”, voambolana iray ampiasaina amin'ny fanentanana entina hilazàna ireo izay arahan'ny hery avy any ivelany maso, mba hahafahana mampiasa izany miaraka amin'ilay famaritana vaovao ny ” hery avy any ivelany” :
“Script writer Xiaohua”: Ry zareo no tena hery avy any ivelany, nefa “tsy misy afa-tsy vitsy an'isa azo isaina amin'ny rantsan-tànana” ry zareo.
Mitsikera ny tsy fisian'ny demokrasia takon'ny olan'ny hery avy any ivelany ny sasany :
“engine888″: Manao izay tiany atao ireo mpanao didiko fe-lehibe, raha tsy manan-jo hifidy ny olon-tsotra.
“Rose bud”: Tia mitsikera ny demokrasia sy ny soatoavina eran-tany ihany koa ny “Hery avy any Ivelany”.
“Daofeiwudao”: ” fanatontoloana” ny toekarena , ny tombontsoa “tantanan'olon-tsotra”, ny taranaka “maka volontany tandrefana”, ny politika ” manaraka teny faneva”, ny vahoaka “voandevo”.
i “infantry soldier” mitodika amin'i Rosia mba hitady hevitra hamahana ny olana momba ny hery avy any ivelany :
“infantry soldier”: Antenaiko ny hisian'ny politika henjana toy ny an'i Vladimir Putin sy ny hanakanana ireo manana kaontim-bola any ivelany tsy ho lasa manam-pahefana amin'ny governemanta.
Ny sasany nandeha lavidavitra kokoa tamin'ny famaritana indray ny voambolana hoe ” hery avy any ivelany ” :
“I am Laoji”: Rehefa tsy mifanaraka ami'ny tombontsoany ny zavatra hitany dia mody any an-tanindrazany -Etazonia – mba hihaona amin'ny fianakaviany. Manganohano sy mianiana ao ambany fanevan'ny Amerikana ry zareo fa hoe hiaro ny tanindrazany.
“Sunbeam pearl”: Raha lazaintsika ny zava-misy marina, tsy ny toerana ambony ihany no tazonin'ireo olona ireo. Hitantsika ireo ohatra maro manodidina antsika.
“Yan Chenggang's blog”: Tena mahantra ireto manam-pahefana tia kolikoly ireto. Mitondra tena toy ny mpangalatra ry zareo ary tsy sahy mandany vola. Mahatsiaro tena ho irery ny vadin'izy ireo any ampitan-dranomasina any ary dia mandany andro miaraka amin'ny lehilahy hafa. Mampidera ny volany ny zanak'izy ireo ka miteraka korontana. Mila olona misy toetra sy kinga vao tonga mpiasam-panjakana tia kolikoly.
Nazavain'i “Superspeed” (@-劲速-) ny fiantraikan'ny kolikoly ao amin'ny toekarena ao an-toerana :
“Superspeed”: Maherin'ny 3.000 lavitrisa yuan ( 500 lavitrisa dolara amerikana) ny vola nivezivezy tany ivelany tamin'ny faran'ny taona 2012. Misy fiantraikany sahady amin'ny fivezivezen'ny vola eto an-toerana izany. Miasa mafy ny ” tanjaka tsara”.